Aptoide - Google PlayStore အတွက်ထူးခြားသောရွေးချယ်စရာ | Linux မှ
Android ဖုန်းများအတွက်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုလူတိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည် (သို့) လိုချင်သည်မဟုတ်။
ကျူးဘားတွင် (ဆဲလ်ဖုန်းရှိအင်တာနက်ပြtheနာကိုလျစ်လျူရှုပါဂူဂဲလ်ပလေးအားအိုင်ပီ သုံး၍ ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း / တပ်ဆင်ခြင်းကိုယူအက်စ်တွင်ငြင်းဆိုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားနည်းလမ်းများကဲ့သို့သော F-Droidအဖြစ်ကောင်းစွာ, Aptoide ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့မှာယခုအချိန်အထိဒေါင်းလုပ်ပေါင်းတစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး၊ သုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်လျှောက်လွှာပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ကျော်၊ ကျွန်ုပ်ကိုသင်မေးရင်မရေမတွက်နိုင်သောနံပါတ်များမရှိပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည် Free Software (F-Droid ကဲ့သို့) မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုလုံးဝနားလည်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ... များစွာသော application များ၊ အခမဲ့လိုင်စင်ဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသည်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်မလုပ်ပါ။
ဘာသာစကား ၃၀ ကျော်ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်ထည့်သွင်းရန် .APK ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
Aptoide မိုဘိုင်းဒေါင်းလုပ် Aptoide ဝဘ်ဆိုက်
Aptoide ကို install သောအခါကြှနျုပျတို့စတိုးမြားစှာထညျ့သှားရမညျ၊ ကြှနျုပျတို့မှ application မြားကိုရှာဖှေို့ထညျ့ပါမညျ့ repositories, ထို့နောက်မည်သည့် app ကိုတပ်ဆင်တပ်ဆင်လိုသည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများမရှိဘဲအပလီကေးရှင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသုံးမပြုလိုသူများ / ပြwantနာမရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်များမရှိသောကြောင့်ကျူးဘားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့မှအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲထည့်သွင်း၊ သုံးနိုင်သည်၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ လုံခြုံမှုဆိုတာသူတို့အတွက် ဦး စားပေးဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ပလီကေးရှင်းတွေကို malware ရှိမရှိသေချာစစ်ဆေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည် Google Play ကိုအသုံးမပြုနိုင်သော်လည်းအခြားဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသောအခြားသူများ Google Play ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် (ဥပမာတရုတ်) ကိုထည့်သွင်းရန်အခြားသူများကဂူးဂဲလ်ကိုအားမကိုးလိုတော့ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်စျေးကွက်မှအက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ခြင်းမပြုသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊ ခေတ်နောက်ကျနေသောဗားရှင်းများမရှိခြင်း၊ စမ်းသပ်ရန်စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းများကိုပင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ နှင့်အက်ပ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ။
Aptoide နှင့် F-Droid အကြားတွင်ကျွန်ုပ်အားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးဖုံးလွှမ်းထားသည်ထင်သည်။ Google Services သည်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Aptoide: ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အတွက် Google Play စတိုးမှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ Aptoide (app) သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကျွန်တော်မမြင်ပါ
အခြားမေးခွန်းတစ်ခုက F-droid ဟာ Aptoide ကိုအခြေခံတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလား။ (ဒီလိုမျိုး F-droid အကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်)
ကျူးဘားတွင်ပျမ်းမျှအင်တာနက်အမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များသာနိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကိုမ ၀ င်လိုပါ
ကောင်းပြီ ... ဟမ်၊ ငါမသိဘူး၊ 64kb bandwidth ဟာအသုံးအများဆုံး၊ 64kb (သို့) 128kb bandwidth ဖြစ်တယ်။
Google Store သို့မဟုတ်အခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ application store တွင်သင်ငွေပေးရမည့်အခမဲ့နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများနှင့်ပြည့်နေသောဖြည့်စွက်ပါ။ ဂူဂဲလ်ပလေးနှင့်အစားထိုးရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားပါ။ စတိုးဆိုင်အမြောက်အများတွင်၎င်းတို့၏ APKs ကို Google Play မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းသည် ...
လိုအပ်သောအချက်များမှာဗဟိုစတိုးတစ်ခုသို့မဟုတ် Aptoide ကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်များပင်ဖြစ်သည်၊ ဤအရာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ (စတိုးဆိုင် ၂၀ ခုမတူပါ (ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများဖြင့်) နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထိန်းချုပ်ရန်တီထွင်သူသို့ဖြစ်စေ၊ တရားဝင်ထုတ်လုပ်သူ။
ဂူဂဲလ်ပလေယာတွင်ပထဝီဝင်နေရာချထားမှုကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည်မှာစိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထိုကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်တစ်နေရာ၌နေပါက VPN (ဥပမာအားဖြင့် SurfEasy သို့မဟုတ် TunnelBear အခမဲ့အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်) ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုရှိသောဂူးဂဲလ်ပလေးကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ တည်ခင်းareည်သော applications များ။ F-Droid သည်အခြားကျိုးနွံမှုရှိသည့်အတွက်သို့မဟုတ် Google developer agreement ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။
ငါထင်တာကတော့ Aptoide စမတ်ဖုန်းမှာကြည့်ကောင်းတယ်၊ Google ကနေအရာရာတိုင်းကိုဖယ်ရှားဖို့သာလိုလိမ့်မယ်၊ စမတ်ဖုန်းကပိုပြီးအရည်ပျော်သွားလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android အတွက်နှေးကွေးစေတဲ့အရာတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူအချို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကလွဲပြီး၊
ကျွန်ုပ်တွင်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တရားဝင်စတိုး၏ကျေးဇူးတင်စကားတစ်ခုမှာ application အချို့ကို "သေချာ" ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် malware သိပ်မရှိခြင်းနှင့် malware ဖြစ်သောခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းသည်ဘယ်သူမှမဖတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ F-Droid ကိုသုံးပါ။ သင့်အားဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စုစည်းထားကြောင်းအာမခံချက်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းသည် Play Store မပါဘဲရောက်လာပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွင်းနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Aptoide ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကစားစရာအသစ်တွင်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် application များကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ post post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man, Aptoide တွင်အရာအားလုံးသည်ပင်လယ်ဓားပြများ (အခမဲ့ဝယ်ယူရန်နည်းလမ်းမရှိ) သည်ပင်လယ်ဓားပြများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်သင်မေ့လျော့ခဲ့ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကပင်လယ်ဓားပြရဲ့ "စတိုး" ပါ။
အဘယ်သူမျှမဆရာ, သင်မှားဖြစ်ကြောင်းလေးစားမှုအားလုံးနှင့်အတူ aptoide ကိုကြည့်ပါစတိုးဆိုင်များကိုထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် (ubuntu ရှိ repositories ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ညီမျှသည်) သင်မည်သည့်စတိုးဆိုင်ကိုမဆိုထည့်သွင်းပြီးသာမန် aptoide စတိုးကိုမသုံးပါကအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများကိုသာရယူအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည် playstore မှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တယ်၊ တစ်ခုထက်ပိုမတစ်ခုမနည်း။
သေချာတာပေါ့၊ သေချာတာပေါ့ ... မင်းတို့ငါသိတယ်ဒါမင်းသိတယ်။ သင်ပြောသမျှ။ အက်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေရန်မည်သည့် repository ကိုထည့်စရာမလိုပါ ထို့အပြင်ထိပ်ဆုံးမှသင်တစ်ခုခုကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါက၎င်းသည်လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်ကသင့်အားအခြားရွေးချယ်စရာလင့်များကိုပြသသည်။ သူတို့သေချာပေါက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့်နည်းလမ်းများ၊ သို့သော် Aptoide အားပေးသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။
Software Center ကို install လုပ်ပြီး Ubuntu ကိုငါသုံးနေတယ်ဆိုပါစို့။ Lightworks နှင့် VMWare Workstation လုံးဝကွဲသွားသော repo တစ်ခုကိုငါထပ်ထည့်သည်။ Ubuntu update manager ကိုသုံးပြီး repos ကို update လုပ်ပြီး repos ကို update လုပ်ပြီးတဲ့နောက် Software Center ကဒီ warez ကိုပြတယ်။ ဒေါ်လာသန်းချီသောမေးခွန်းမှာ - Canonical ၏အမှားမှာ warez သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စင်တာတွင်ရှိသော“ ကတ်တလောက်” တွင်ရှိနေခြင်းလောသို့မဟုတ် repo ကိုဖန်တီးသူမည်သူမဆို၏အမှားလား။
အိုး share and Warez ကိုပြောင်းရန်အလွန်ခက်ခဲသော Android shareware လည်းရှိသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည် 'သို့မဟုတ် WhatsApp' ကဲ့သို့ 'crack' ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Daxx ၁၃ ဟုသူကပြောသည်
ခိုးကူးထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် malware များပါ ၀ င်နိုင်သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုထောက်ခံသောဘလော့ဂ်တစ်ခု (အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောနိုင်သည်၊ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်အက်ပလီကေးရှင်းတိုင်းကိုစစ်ဆေး။ မရပါ။ ) ... ငါကြည့်ဖို့လိုအပ်သည်။
F-droid? ဟုတ်တယ် Aptoide ... ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင် app များကို hack ချင်လျှင်သင်၏အရာဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ဓာတ်ပုံများအခိုးခံရလျှင်သင်၏အမှားမဟုတ်ပါ။
Play Services ကောဘယ်လိုလဲ ... ဥပမာသတိပေးချက်များအတွက်၎င်းကိုလိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများရှိသည်။ gmail, keep, map စသည့်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းကိုသင်လိုအပ်သည်။
Aptoide ၎င်းသည် open source ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Aptoide အတွက်မဟုတ်လျှင် F-Droid ကိုမွေးဖွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ZAS EN TODA LA ကို BOCA !!!
သင်၏လက်ချောင်းများကိုရှာဖွေခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Aptoide ဆိုဒ်ပထမ ဦး ဆုံးပြောလျှင် -
Aptoide သည်ဏဖြစ်သည်ကလောင်အရင်းအမြစ် Android ရှိ repositories သို့ချဉ်းကပ်နည်း။ Aptoide ဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် repositories applications များဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်၏ client သို့မဟုတ်အခြား repositories မှ၎င်းတို့ကို download, ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ရန် client ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, http://aptoide.com ကိုသွားပါ။
ပထမ ဦး စွာ Aptoide သည်ခိုးကူးထားသော app စတိုးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်ခိုးကူးထားသောအက်ပ်များပါ ၀ င်နိုင်သောစတိုးဆိုင်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်တရားဝင် aptoide စတိုးကိုတရားဝင်သုံးလျှင်သင်ကဲ့သို့သောလိုင်စင်ကိုချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ပါ။
GMail၊ Keep သို့မဟုတ် Maps နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုကိုအသုံးမပြုပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကျူးဘားတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ဂူဂဲလ်သည်၎င်းတို့၏မွမ်းမံချက်များကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ heh ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်! Miui ကို Defy + ပေါ်တွင်သာ install လုပ်ပြီး google မှဘာမှမယူပါ။ ထို့ကြောင့် Aptoide မှ apps များကိုကျွန်ုပ်စတင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများကို F-Droid အကြောင်းသိရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုကိုလက်လှမ်းမမှီသောသူများနှင့်၎င်းကိုရှောင်ရှားလိုသူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
google play ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသော၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင် ၁၆၀ MB MB သာရှိပြီးနေရာမရှိသလောက်၊ google play နှင့် facebook ဝန်ဆောင်မှုများသည်မှတ်ဉာဏ်အများဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြmemoryနာလည်းအနည်းငယ်သာရှိသော internal memory နှင့်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်မည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆိုသင်ရှာတွေ့နိုင်မည့် Link2SD ကို အသုံးပြု၍ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
သင်၏မှတ်ဥာဏ်မှပရိုဂရမ်များကိုပြင်ပသို့ယူဆောင်သွားပါ၊ သို့သော်သင်၏ SD ကိုအခန်းကန့် ခွဲ၍ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများပျောက်သွားစရာမလိုပါ၊ စိတ်မပူပါနှင့်။ ထည့်သွင်းပါ၊ ထည့်သွင်းပါ၊ သင့်စာရင်းကိုရရှိပါလိမ့်မည်။ သင်၏ SD မှတ်ဉာဏ်သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုသည့်အတွက် ၄၀ mb ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည်သင့်အတွင်းပိုင်းတွင် ၅ MB သာအလေးချိန်ရှိပြီးသင်နောက်ထပ်အက်ပ်များအတွက်နေရာရှိသည်။
မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်မင်းပြွန်ပေါ်မှာမင်းကပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းပြပေးမယ့်ဗွီဒီယိုရှိတယ်၊ မင်းကိုငါ့ကိုလင့်ခ်ပေးစေချင်တယ်၊ ငါ့ကိုပြောပြပါ၊ ငါ့ရှင်းပြချက်နဲ့ငါ့ကိုပြောပြပါရစေ။
မင်္ဂလာပါ။ မင်းဘာ app တွေပြောနေတာလဲ။
တခြားသူတွေက Google ကိုမမှီခိုချင်တော့ဘူး။
ဒီတော့ Android မဝယ်နဲ့ !!
ကောင်းပြီ…ငါသိသာတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက် iPhone မဝယ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ Google Android ကိုလုံးဝမမှီခိုချင်ဘူးဆိုရင် Android ပစ္စည်းမဝယ်ဘူး၊ ငါ့မှာဘာရွေးစရာတွေရှိလဲ။ :
၁။ Windows Phone (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ )
၂။ FirefoxOS (အစိမ်းလွန်းသေး)
ကျွန်ုပ်သည်ကျူးဘားတွင်နေထိုင်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် Google ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုမသုံးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် F-Droid သို့မဟုတ် Aptoide ကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါသည်။
Windows Phone မှာ android ပြblockingနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ကျူးဘားတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမှာ firefox os သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့အဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဟေးငါတို့စမ်းကြည့်ရမယ်။ အားလုံး Modes သာထံမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖာနန်ဒို Cambranis Chiñas ဟုသူကပြောသည်
DuBooster က Aptoide apk (၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော) တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသည်ဟုပြောပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားသတိပေးခြင်းမြင့်မားသောစွန့်စားမှု၊ ဗိုင်းရပ်စ် PUA!ApDown.A@Android နှင့်၎င်း၏အပြုအမူသည်“ အသုံးပြုသူစွဲချက်များ” ဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်အတွင်းတည်နေရာ, access အကောင့်များ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်
Fernando Cambranis Chiñasအားပြန်ပြောပါ
ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာ Aptoide ရဲ့ Aptoide ရဲ့ community repos ကနေ Warez တွေကို download လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားပြီလားဒါမှမဟုတ်သိတယ်လား။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဝဗ်ပေါ်၌ဖတ်သည့်အခါ၎င်းသည် Trojan ဖြစ်သည်၊ သစ်တော်သီးများ၊ ပန်းသီးများမှာကျွန်ုပ်အနေနှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်းရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ်အခြားသိလိုစိတ်တစ်ခုအဖြစ်လက်ဆင့်ကမ်းခွင့်ရှိမရှိကိုစုံစမ်းရန်မျှော်လင့်ပါလိမ့်မည်။
DoBooster သည်ကစားစရာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟန်နှင့်တူသည်၊ သင်သည်ထို apk သို့ပို့သင့်သည် VirusTotal နှင့်၎င်းဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးမည်မျှတွေ့ရှိသည်ကိုကြည့်ပါ (နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုတွေ့ရှိလျှင်၎င်းတို့သည်မှားယွင်းသောလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်) ။
သင်တောင်းသောအပိုခွင့်ပြုချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူမည်မဟုတ်၊ အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည် Xposed + App ဆက်တင်များတပ်ဆင်ခြင်း (အချို့သောအက်ပ်များဖြင့်သင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအသုံးချပြီးပါကဤပြtheseနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ Aptoide သည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်)
ငါ့မှာ Miui Rom (Miui.es ဗားရှင်း) ရှိတဲ့ Samsung Galaxy S2 ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ပေးသော application များကိုတွေ့သောတရုတ်စျေးကွက်နှင့်အတူပါလာသည်။ သူသည် Gti-apk ဗားရှင်းကိုမသုံးမီကသူ၏အကြောင်းအရာကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်မှမွမ်းမံခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်။ နောက်ထပ်အကြံပေးလိုသည်မှာ Apk galaxy ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အသစ်သောအရာများကိုအဆက်မပြတ်တင်နေသည်။
ငါသိအဖြစ်ဝေး။ ငါခေါ် Aptoide အတော်များများနှင့်ညီမျှတွေ့ပြီ ကျွန်ုပ်၏အက်ပ် Tencent Holdings နှင့်အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်သည်။
Mountain View / Google Software monopoly ၏ TENCENT ၏အဓိကပြိုင်ဘက်များအပါအ ၀ င်တရုတ်ကုမ္ပဏီများကိုသတိပြုပါ၊ TENCENT သည်အသုံးပြုသူ metadata များကိုခြေရာခံရန်တရုတ်အစိုးရနှင့်သဘောတူညီမှုရှိပြီး၎င်းသည်အာရှ Apple ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
TENCENT ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ ၄ င်း၏ antispyware ဖြစ်သည် http://safe.qq.com/download
ကျွန်တော်ရုရှားကိုအချိန်အကြာကြီးသုံးခဲ့တယ် Yandex စတိုး အဆင်သင့်ရလဒ်များကိုထက်ပိုအတူ။
Luis Alfredo ကိုပြန်ပြောပါ
Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခေါင်းစဉ်ကိုစစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်သောသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခဲ့သည်။ Adobe သည် Creative Cloud အတွက် Android ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် Linux ကိုအဘို့ကို Adobe CC ကို applications များနောက်ဆုံးတော့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဖကျတှငျဤသည်အလွန်ကောင်းလှ၏, မကောင်းတဲ့အခြမ်းယခုသူတို့အန်းဒရွိုက် 4.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလုပ်လုပ်ကြသည်နှင့်ဤဗားရှင်းတည်ငြိမ်သည်နှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်အားလုံးမပူဇော် Creative Cloud tools ။ Adobe က iOS တွင်လည်ပတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည်၎င်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုပုံမှန်ပုံမှန် update လုပ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်။
Play Store ကို ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Play Store ၏အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိမသိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်တစ်ခုမှာဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းမှကမ်းလှမ်းသောအဆင့်ကိုရောက်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်။ တကယ်လို့ aptoide ဟာ Play Store နဲ့တကယ့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
Play Store သို့ပြန်သွားပါ
Store က ဟုသူကပြောသည်
Aptoide ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ PlayStore နဲ့ယှဉ်တယ်။ ငါသည်လည်း Play Store interface ကို Aptoide ထက်အများကြီးပိုနှစ်သက်သည်။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါနဲ့တူတယ် aptoide သည်အမြဲတမ်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။
whatsapp ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ဟုသူကပြောသည်
တရားဝင်မဟုတ်သောစတိုးဆိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာတွင်သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွင်းရှိ application များသည်အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်သင်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတိထားရမှာ, သင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ APKs ရနိုင်သည်။
Gabriel War Gaspar ဟုသူကပြောသည်
Gabriel Guerra Gaspar အားပြန်ပြောပါ
ငါ aptoide ကိုဖျက်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ငါ့မှာ Blackmart ရှိတယ်။ အခြားအချိန်တွေမှာ aptoide ထက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် aptoide မှာပြည့်စုံတဲ့ application တွေရှိတယ်။ blackmart လိုမဟုတ်ဘဲ application ကနေ download လုပ်တယ်။ ဒါကအားနည်းချက်တခုဖြစ်တယ်။ ငါဒီမှာသင်အကြံပြုသောအရာကိုကြိုးစားသွားမယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Blackmart ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာ၊ သူတို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာနဲ့အမျှဝါဒဖြန့်မှုဟာရူးသွပ်ပြီးအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်မှန်ပါသည်၊ aptoide သည်စတိုးဆိုင်ကိုကစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဂူးဂဲလ်သည်သူတို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုမဖြစ်လာစေရန်၎င်းကိုသူတို့၏စတိုးဆိုင်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိပါက aptoide တွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအင်တာနက်မရှိဘဲထည့်သွင်းထားသည်
အခြားရွေးချယ်စရာမှာအလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဒေါင်းလုပ်တွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Google သည်၎င်းကို၎င်း၏ repository မှခဏဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဓိက apk သည်အတော်အတန်လုံခြုံသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း download လုပ်နိုင်သော repositories မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုသတိပြုပါ။
stela torres ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် youtobe ကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကစားဆိုင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် aptoide သာရှိသည်။ ၎င်းသည်တရုတ် s5 ဖြစ်သည်။
estela torres အားပြန်ကြားပါ
ဟိုင်းနဲ Huillical leiva ဟုသူကပြောသည်
အဆိုပါ aptoide အံ့သြဖွယ်ပါပဲ
henan huillical leiva သို့ပြန်သွားပါ
Aptoide, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ။ ကိုယ်ကြိုက်တယ် !!! Aptoide
အလက်ဇန္ Mora Morales ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ လူသစ် jjjjjjj ပါ
Alexandra Mora Morales အားပြန်ပြောပါ
Marth cedeño ဟုသူကပြောသည်
ဂူဂဲလ်ကစားခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Aptoide ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာ၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောဖော်ပြချက်များနှင့်သူတို့ download လုပ်ထားသောအမြန်နှုန်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့သည် Google) ။
လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်က aptoide သည် Trojan ဖြစ်သည်ဟူသော screen ပေါ်မှသတိပေးချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ဖုန်းသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြုခြင်း၊ ငါလုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် Aptoide အပါအဝင်ကျွန်ုပ်၏ app များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်တော့သည်။ ငါ antivirus ကူးယူပြီးအကြိမ်များစွာပြန်လည်စတင်ပြီးဆဲလ်ဖုန်းအနည်းငယ်တိုးတက်လာသည်။ ဒါကြောင့်သုတေသနတွေအများကြီးလုပ်ပြီးနောက်မှာငါ aptoide ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် antivirus က aptoides မှာသေစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေကြောင်းပြသခဲ့သည်မှာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Marth cedeno ဟုသူကပြောသည်
ငါ aptoide ကို install လုပ်ပြီးတစ်နေ့မှာငါမှာ virus တစ်ခုရှိတယ်၊ antivirus တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်။ aptoide ကဗိုင်းရပ်စ်လို့ငါပြောတယ်။ ငါ uninstall လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်သူတို့ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ဗျူဟာတွေလား။
marth cedeno အားပြန်ကြားပါ
Mobo Market သည် aptoide သည်များစွာသောကြော်ငြာများကိုမတင်သောကြောင့်တူညီသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုကောင်းသည်။ သို့သော်ငါ aptoide ဂိမ်းကို update လုပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့သည်။ သို့သော် MoboMarket No
စန်တီယာဂို Smith ဟုသူကပြောသည်
မည်သည့် update ကိုမလိုဘဲ aptoide ထည့်သွင်းနည်း
Smith Santiago သို့ပြန်သွားပါ
ဘယ်လောက် apptoid အလေးချိန်
ဟိုဆေး anonimus ဟုသူကပြောသည်
Jose anonimus သို့ပြန်သွားပါ
Aptoide သည်အလွန်ကောင်းသော application ဖြစ်သည်
Score Hero ကဲ့သို့သောဘောလုံးဂိမ်းများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သည်။ 🙂ငါသည်လည်းဘောလုံးဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သည်။
ကြွေပြား2ဟုသူကပြောသည်
Tiles သို့ပြန်သွားရန် 2
Android6ဖြင့် aptoide အလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါ
WhatsApp ကိုအခမဲ့ ဟုသူကပြောသည်
Play Store ကိုယ်တိုင်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အန္တရာယ်မကင်းပါကအခြားရင်းမြစ်များမှလုပ်ခြင်းသည်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။
WhatsApp ကို Free ပြန်ကြားလိုက်ပါ
google play စတိုးမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအက္ခရာဖြစ်သည်
ငါဒါကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တစ်ခုခုရှာတဲ့အခါ၊ သင်ဟာ applications တွေအများကြီးရပြီးသင် download လုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော့်အတွက်…။ ဒီမှာမက္ကစီကို Aptoide ဟာအလွန်ကောင်းတယ်။ မှတ်ဥာဏ်နည်းတဲ့ဖုန်းမှာသုံးတယ်၊ ဒါကမြန်တယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုကစားစတိုးဆိုင်ကဲ့သို့တူညီသောအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် malware ဖြစ်ပါကမည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆို၎င်းတို့ကိုရှာနိုင်သည်။ ထိုအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး…။
John Second ဟုသူကပြောသည်
စတိုးနှင့် aptoide ကစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် https://actualizar.net App တစ်ခုချင်းစီကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအမြဲရှိသည်
Juan Segundo အားပြန်ပြောပါ
ဂူးဂဲလ်ပလေးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်စပိုင်ဝဲအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ရောနှောနေသည်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်အနည်းငယ်ကသင်သည် Hungry Birds ဂိမ်းကို Android ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်မြှင့်တင်ခြင်းကိုတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည် Prism ပြofနာကြောင့်ယုန်များမပေါက်မချင်းအထိဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုများ၏နောက်ကျောတံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ GP မှာဒီလိုမျိုးအပြစ်မဲ့ application ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနိုင်မလဲ။ သူတို့ဟာ Big Brother သကြားလုံးတွေပါ။
ပြီးတော့ဂူဂဲလ်ကသုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုစီးပွားဖြစ်အတွက်သာစုဆောင်းသည်ဟုမပြောပါနှင့်။ အကြောင်းပြချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစတင်ခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာကြီးသည်၎င်းတို့တန်ဖိုးကိုစနစ်ကျင့်သုံးသောကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကြော်ငြာခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းအားဖြင့်အများစုသည်လျစ်လျူရှုထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းအာဏာရှင်စနစ်ကိုကမ္ဘာကြီးသည်လမ်းမရှိသေးပါ။ စနစ်လည်ပတ်ရန်အတွက်ချမှတ်ထားသောကြီးထွားနှုန်းကိုမထောက်ပံ့နိုင်သည့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုအပေါ်ကမ္ဘာ၏ထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်စားသုံးသူအမြင်။
ငါ့ဘဝမှာတတိယမြောက် Android ကိရိယာရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ Gmail လိပ်စာမထည့်ထားဘူး၊ ဒီတစ်ခါတော့ငါဟာမိုဘိုင်းနံပါတ်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်မနေစတင်ကတည်းကသူတို့ကိုမသုံးဘူး။ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများသည်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးမှတ်ဉာဏ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နာမည်မပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသည့်အခါ၊ မလိုအပ်သောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်များဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ငါ Blokada ကို F-droid မှတပ်ဆင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဒေတာအစီအစဉ်ကြောင့်သွေးထွက်သံယိုကြေငြာခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
ထို့အပြင်ကြီးမားသောပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားမှုဖြစ်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါ Paperclip စစ်ဆင်ရေး၏အချိန်မှစ။ ဒီဇိုင်းမဟာဗျူဟာ။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့၊ မီဒီယာတွေက Huxley ရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကမ္ဘာမှာနေထိုင်ရတာကိုနှစ်သက်ကြပုံရသည်။